Izikolo ezi-5 eziPhambili zeMed Med eFlorida 2022
January 21, 2022 Eze uThadayo
Izikolo ezi-5 eziPhambili zeMed Med eFlorida
Uluhlu oluhlanganisiweyo lwezona zikolo zihamba phambili eFlorida kuxoxwe ngalo kwesi sithuba. Iinkcukacha zezi zikolo ziya kunceda ekuququzeleleni ukwamkelwa kwabafundi abafuna ukuqala uqeqesho kwicandelo lezonyango.
Icandelo lezonyango lelinye lamacandelo akhula ngokukhawuleza, kwaye izinto ezintsha zavela apha naphaya ukujongana nezifo ezibulalayo kunye nezifo, isenendlela ende ekusafuneka yenziwe. Amayeza aqale emva phayaa oko abantu babekhona, iselapha kwaye iseza kuqhubeka kwaye inkqubela phambili iya kwenziwa. Ngaphandle kokuba ujikeleze ixesha elide, amayeza ikwayintsimi ethembisayo naphakathi kobugcisa obuhlawulwa kakhulu.
Abantu abakuloo ndawo bajongana ngqo nobomi, nokuba yeyiphi na indlela enokuyithatha, ke ngoko, baxhotyiswe ngolwazi olunzulu, olunzulu ngecandelo labo ukuqinisekisa ukuba kukho inkqubela phambili. Esi sesinye sezizathu zokuba kutheni iyintsimi enzima ukungena kuyo kwaye ithatha ixesha elide ukuyigqiba kuba kuya kufuneka uthethe kwaye ugqibelele emsebenzini wakho.
Icandelo lezonyango likhulu, njengobunjineli emva kwako konke oko kungumqobo wobukho bethu. Zingaphezulu kwe-25 iinkalo kwicandelo lezonyango, ezona zaziwayo phakathi kwazo ngamazinyo, utyando, isifo, i-immunology, ikhemesti, iPediatrics, i-psychology, i-neurology, njl.njl. kwaye ndinako ukuyiphatha.
Indlela eqhelekileyo yokuba ngugqirha wezengqondo, ugqirha wamazinyo, ugqirha wezamayeza, ugqirha wamehlo, okanye nabuphi na ubuchwephesha bezonyango kukuya kwisikolo sezonyango, landela icandelo olikhethileyo, ufumane isidanga kunye nezinye iziqinisekiso ezifanelekileyo zokuziqhelanisa. Isikolo sezonyango siya kukuxhobisa ngenzululwazi yezobugcisa kunye nokusebenza ngalo lonke ulwazi, izakhono, ubuchule, indlela yokusebenza, nayo nayiphi na into enokuba yeyona ibalaseleyo kwicandelo lakho lomdla.
Ewe, ubuncinci yile nto enokwenziwa sisikolo esihle sezonyango. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuya kwisikolo sezonyango KUFUNEKA kuqala ugcwalise isikolo saphambi kokufunda, kwaye siyintoni esi sikolo senziwe kwangaphambili? Fumana apha ngezantsi
1 Yintoni isikolo sangaphambi kweMed?
2 Ngubani onokufaka isicelo kwizikolo zaphambi kwe-med eFlorida?
3 Iimfuneko zokufaka isicelo kwisikolo esiphambi kwe-med eFlorida
4 Izibonelelo zokuya kwisikolo esandulelayo
5 Ezona zikolo ziPhambili zeMed kwiFlorida
5.1 1. IYunivesithi yaseFlorida
5.2 2. IYunivesithi yaseFlorida State (FSU), eTallahassee
5.3 3. IYunivesithi yaseMiami
5.4 4. IYunivesithi yaseCentral Florida (UCF)
5.5 5. IYunivesithi yoMzantsi Florida (USF)
Yintoni isikolo sangaphambi kweMed?
Isikolo esenziwe kwangaphambili liziko lemfundo eliphezulu elilungiselela abafundi abanomdla kwizikolo zesikolo. Isikolo esiqulunqwe kwangaphambili siphuhlisa ulwazi olusisiseko lwaba bafundi sibavumela ukuba bahlangabezane neemfuno zemfundo kunye nobukrelekrele ukuze bamkelwe kwisikolo sezonyango apho banokuqhubeka nokufunda ukuba kubandakanya ntoni na umsebenzi wabo wezonyango.
Ukongeza, i-premed ligama elisetyenziselwa nayiphi na ikholeji yeminyaka emine okanye eyunivesithi ethathwa ngugqirha onqwenela ngaphambi kokuya kwisikolo sezonyango.
Ke, kule posti yebhlog, sixoxa ngezona zikolo zihamba phambili eFlorida zabafundi baseFlorida, eUnited States, okanye phesheya abafuna ukulandela isidanga sonyango. Ezi zikolo zezona zibalaseleyo kwimfundo eqingqiweyo kwaye ziyaziwa ngokuxhobisa abafundi ngemfuneko yokungena kuso nasiphi na isikolo sezonyango emhlabeni. Oko kukuthi, baya kukuxhasa kwaye bakulungiselele inkqubo yokwenza isicelo sesikolo sezonyango yenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uziqwalasele xa ujonga iikholeji ezichaziweyo.
Ngubani onokufaka isicelo kwizikolo zaphambi kwe-med eFlorida?
Abantu abanokufaka izicelo kwizikolo eziqingqiweyo eFlorida ngabafundi abafuna ukulandela ikhondo lonyango. Unokuba uvela eFlorida, naphi na e-US, okanye ngaphandle kwe-US, iinkqubo zemfundo ecwangcisiweyo kwezi zikolo zilungiselelwe ukuhlangabezana neemfuno zakho kwaye zikufikise nakwesiphi na sezona zikolo zihamba phambili eFlorida okanye nakweyiphi na enye indawo.
Iimfuneko zokufaka isicelo kwisikolo esiphambi kwe-med eFlorida
Ukufaka isicelo saso nasiphi na isikolo saseFlorida kufuneka ugqibe amabanga aphakamileyo okanye amabanga aphakamileyo njengomfundi wesayensi. Abafakizicelo kufuneka babonelele ngezi zifundo zilandelayo ngelixa bekwisikolo esiphakamileyo:
Unyaka omnye webhayoloji kunye nelebhu
Unyaka omnye wekhemistri ngokubanzi kunye nelebhu
Unyaka omnye we-organic chemistry kunye nelebhu
Unyaka omnye we-physics kunye nelebhu
Unyaka omnye wesiNgesi
Unyaka omnye webhayoloji
Unyaka omnye wokubala
Izibonelelo zokuya kwisikolo esandulelayo
Oku kulandelayo zizibonelelo zesikolo esenziwe kwangaphambili:
Inika abafundi ukuqonda malunga nokuba kunjani ukuba ngugqirha
Abacebisi abaqeqeshiweyo okanye abafundela ubuchule baya kukubonelela ngoncedo lokuba ungangena kanjani kwicandelo lezonyango elifanelekileyo kwisikolo esifanelekileyo sezonyango.
Ezinye izikolo ezilungiselelwe kwangaphambili zibonelela ngezidanga zokuqala amanye amathuba anje ngophando kunye namava ezonyango abenza ukuba babengumgqatswa ongcono ngakumbi kwisikolo sezonyango.
Izikolo zonyango zineemfuno ezingqongqo zokwamkelwa, kuya kufuneka uqiniseke ukuba isikolo esenziwe kwangaphambili kunye nezifundo osele uzithathile ziya kukunceda ungene. ugqirha.
Zininzi iikholeji onokukhetha kuzo, kwaye ukukhetha eyiyo kunokuba ngumceli mngeni. Nokuba siphi na isikolo esenzelwe kwangaphambili ofunda kuso, kuya kufuneka uqiniseke ukuba ufezekisa amanqaku aphezulu ngokwaneleyo kwiimvavanyo zakho zesikolo ukuze uphumelele ukhuphiswano.
Kwaye okokugqibela, awunyanzelekanga ukuba uhambe nomsebenzi wokukhangela isikolo esenziwe kwangaphambili, funda ngononophelo kwezona zikolo zihamba phambili eFlorida ezixoxwe ngezantsi, kwaye ukhethe isikolo esikulungeleyo.
Ezona zikolo ziPhambili zeMed kwiFlorida
IYunivesithi yaseFlorida State (FSU), eTallahassee
IYunivesithi yaseCentral Florida (UCF)
IYunivesithi yaseMzantsi Florida (USF)
1. IYunivesithi yaseFlorida
IYunivesithi yaseFlorida sesinye sezona zikolo zihamba phambili eFlorida. Liziko likarhulumente elinikezela ngezibonelelo zemfundo kumgangatho ophakamileyo eGainesville, eFlorida. Iyunivesithi yaqala ukusebenza ngo-1853 kwaye ukusukela ngoku ibonelela ngeenkqubo zemfundo ekumgangatho wehlabathi ezenza ukuba ime phakathi kwezona zilungileyo elizweni. Inika ukwamkelwa kuluhlu olubanzi lweenkqubo zesidanga sokuqala kubafundi basekhaya nakwamanye amazwe kodwa umrhumo wokufunda kwabafundi bamanye amazwe uphantse ube kathathu wento ehlawulwa ngabahlali.
Kwinqanaba lesizwe leyunivesithi, iYunivesithi yaseFlorida ibala i-30th isikhundla kunye nenqanaba lokwamkelwa kwayo ngama-37%. Iindaba zase-US kunye neNgxelo yeHlabathi zibeka iYunivesithi yaseFlorida eGainesville's College of Medicine njengesikolo se-42nd esona sigqwesileyo kwezonyango kweli lizwe ukuze kwenziwe uphando, kwaye kulapho abafundi abalungiselelwe ukuqala uhambo lwabo baya kwicandelo lezonyango.
Abafundi be-pre-med banokufumana uqeqesho lomntu ngamnye nolweqela kwi-UF yokucebisa kwangaphambili kwezempilo kubasebenzi kuyo yonke imisebenzi yabo yesidanga sokuqala. Abafundi abatsha, umzekelo, bayakhuthazwa ukuba baye kwiisemina zokucebisa ukuba bafunde malunga nemigangatho yemfundo, iimfuneko zangaphambili, kunye nolwazelelo olufunekayo ekufuneka abafundi bezidanga bahlangane nalo ukuze baqwalaselwe nzulu ekungeneni kwezonyango.
Abafundi banikwa ulwazi ngamathuba ophando kunye nokufundela i-MCAT njengoko beqhubeka nenkqubo kunye nokuqulunqa isicelo esinyanzelekileyo sesikolo sezonyango ngoonobumba abagqwesileyo. Ngophando lwesidanga sokuqala, i-EMT, kunye namathuba okubhala, kunye noncedo olunamandla lwabacebisi kunye noqeqesho oluphezulu kwezemfundo, iYunivesithi yaseFlorida inedumela ekudala limisiwe.
Tyelela iWebhusayithi yeSikolo
2. IYunivesithi yaseFlorida State (FSU), eTallahassee
I-FSU Tallahassee yenye eyaziwayo, eyunivesithi yophando yoluntu eFlorida esekwe e-1851 kwaye yamkelwa njengesinye sezona zikolo zihamba phambili eFlorida. Eliziko libandakanya iikholeji ezili-16 kunye nezikolo kubandakanya iikholeji zoNyango, iZifundo eziSetyenzisiweyo, uMculo, ubuhlengikazi, ezobuNjineli, ezomthetho, kunye nezinye ezibonelela ngenkqubo yesidanga ekhokelela kwi-baccalaureate (104), masters (112), Ph.D. (70), kunye nenkosi ephambili, iinkqubo ezili-12 zeengcali, kunye neenkqubo zesidanga sobuchule ezi-3.
I-FSU ayiboneleli ngenkqubo ye-pre-med okanye yangaphambi kwempilo, nangona i-Biology, i-Biochemistry, i-Chemistry, kunye ne-Exercise Science zezinye zezona zaziwa kakhulu phakathi kwabo banomdla. Inkqubo yokucebisa ngamayeza kwangaphambili inikezela abafundi ingqalelo eyodwa kunye neepaneli zokubamba kunye namagosa okwamkelwa kwizikolo eziphambili zonyango ababelana ngengcebiso malunga nokulungiselela izicelo zezonyango kunye nokwenza umbono oqinisekileyo ngexesha lodliwanondlebe.
I-FSU ixhasa imisebenzi yecandelo langaphandle njengokujoyina iqela elifana noMbutho weNkcubeko wabaFundi abaPhambi kwezeMpilo, eliququzelela amanyathelo enkonzo yoluntu, ukunceda abafundi babe ngabantu abajikeleze kakuhle. Abafundi be-pre-med bayakhuthazwa ukuba bavolontiye kumaziko ezempilo afana neTallahassee Medical Health Centre ukuze bafumane umbono oqinisekileyo wobuchwephesha kunye nokomeleza izicelo zabo zezikolo zonyango.
I-FSU yamkelwe kuzwelonke nakwamanye amazwe phakathi kwezona zikolo zihamba phambili eFlorida, ke, unokufuna ukuqwalasela ukufaka isicelo sakho apho kulungiselelwe inkqubo yakho ecwangcisiweyo.
3. IYunivesithi yaseMiami
IYunivesithi yaseMiami yiyunivesithi yophando yabucala enabafundi abangaphezulu kwe-18,000 abavela kuzo zonke iinkalo zobomi. Uluntu lwayo olwahlukeneyo nolunempilo luyenza indawo apho abafundi bafuna ukuba khona kwaye balandele iinjongo zabo zemfundo. I-UMiami yasekwa kwi-1925 eCoral Gables, eFlorida, kwaye ibekwa phakathi kwezona zikolo zihamba phambili eFlorida.
U ka-M wahlulwe waba ziikholeji ezili-12 kunye nezikolo ezibandakanya iSikolo sezoNyango sikaLeonard M. Miller kwiSithili seMpilo seMiami, esibonelela ngeyona nkqubo iphambili kurhulumente. Isikolo sezonyango sikwindawo ehleliweyo ngeendaba zase-US kunye neNgxelo yeHlabathi phakathi kwezona zikolo ziphambili ze-50 zophando kweli lizwe.
IOfisi yoCebiso noPhuhliso lwezeMpilo ibonelela ngesikhokelo esibanzi kubafundi abakhethwe kwangaphambili. Abafundi bakhuthazwa ukuba benze oogqirha bezithunzi zomsebenzi kwaye baye kwiindibano zocweyo ezixhaswe yi-UM ezixoxa ngemigangatho yokwamkelwa kwabafundi kwiziko lezonyango ukongeza ekugqibeni umngeni wesayensi kunye nezibalo.
Abafundi bayakhuthazwa ukuba babe ngabathathi-nxaxheba abakhutheleyo kwimibutho yabafundi kuba ubungqina bamava obunkokeli banokunceda kwisicelo sezonyango. Kukwakho nenkqubo yokucebisa oontanga kwii-pre-med freshmen kunye ne-sophomores. IOfisi yoCebiso noPhuhliso lwezeMpilo nayo igcina imibutho yabafundi elishumi esi-9 esikolweni.
4. IYunivesithi yaseCentral Florida (UCF)
I-UCF yasekwa ngonyaka we-1963 njengeyunivesithi yophando kawonkewonke eOrange County, eFlorida, kwaye ihlala ikwisimo sezona zikolo zihamba phambili eFlorida. Inama-71,913 abafundi bamanye amazwe nabasekhaya ababhalise kwiinkqubo zesidanga sokuqala kunye nakwizidanga zokuqala.
Endaweni ye-pre-med okanye i-pre-health esemthethweni, abafundi abanomdla kwezi nkalo bafunda iiSayensi zeBiomedical, Psychology, kunye nezifundo eziPhakathi. Ujoliso lwe-Biology-Preprofessional kwiSebe le-UCF le-Biology lenzelwe kakuhle ukunceda abafundi ukuba bamkelwe kwaye baphumelele kwiinkqubo zezempilo.
Eliziko line-ofisi yokucebisa ngempilo eLake Nona, edibene neKholeji yezoNyango ye-UCF. Abasebenzi banika isikhokelo kunye noomasifundisane kwimicimbi enje ngokukhethwa kwezifundo kunye nemisebenzi yokuzithandela enceda abafundi ukuba baphucule ngokwasengqondweni nangobuqu ukulungiselela ikhondo elinzima lezonyango.
Ukongeza, abafundi ababhalise kwiinkqubo ezilungiselelwe kwangaphambili banokuthatha inxaxheba kwinkqubo yokucebisa, apho banokufumana khona uncedo kubafundi bezonyango be-UCF. Abafundi banokuphucula izakhono zabo ngaphandle kwegumbi lokufundela ngokujoyina iqela le-Pre-Med AMSA kunye nokuthatha inxaxheba kuphando nakumalinge enkonzo yoluntu.
5. IYunivesithi yoMzantsi Florida (USF)
IYunivesithi yaseMzantsi Florida yenye yezona zikolo zihamba phambili eFlorida. Yiyunivesithi yophando kawonkewonke esekwe kwi1956 kwaye ibekwe eTampa, eFlorida nezinye iikhampasi eSt.Petersburg naseSarasota. I-USF yahlulwe yaziikholeji ezili-14 ezibonelela ngokudibeneyo ngaphezulu kwe-200 igraduate, isidanga, iingcali, kunye neenkqubo zesidanga sobugqirha.
I-Pre-Medical Sciences ayisiyiyo inkqubo yesidanga e-USF, kodwa yingoma enokuthi ichongwe ngabafundi xa bethatha isigqibo ngoyena ndoqo. I-Biomedical Sciences, i-Biology, i-Biology yezoNyango, kunye neKhemistry zezinye zezona zenzululwazi zidumileyo phakathi kwabafundi abangaphambi kwempilo. IiSayensi zezeMpilo, i-Psychology, kunye neMpilo yoLuntu zizinto eziqhelekileyo ezingezizo ezesayensi. Abafundi be-pre-med e-USF banokujoyina iiklabhu zonyango ezinje nge-UEMSA kunye nePAMSA.
Ezi zizikolo ezi-5 eziphambili ze-pre med eFlorida, inkqubo yaphambi koku kula maziko yenzelwe ukukunika unxibelelwano kunye namathuba okukunceda ubeke isicelo esigqibeleleyo.
Ngaba iFlorida ilungile kwiinkqubo zangaphambili?
IFlorida igcina ezinye zeenkqubo ze-BS / MD ezenza indawo entle yokulandela izifundo zesidanga kwicandelo lezonyango.
Ngaba kunyanzelekile ngaphambi kweFlorida?
Ukulandela inkqubo yezonyango kufuneka kuqala uye kwi-med med kwaye uhlangabeze neemfuno zokugqitha kwisikolo sezonyango. Ke ngoko, ukugqiba i-pre med kunyanzelekile eFlorida.
Sisiphi esona sikolo sinenkqubo efanelekileyo yangaphambi kokuya eFlorida?
IYunivesithi yaseFlorida, eGainesville ineyona nkqubo iphambili ngaphambili eFlorida.
Yeyiphi eyona nto iphambili kwi-pre med?
Ezona zifundo zibalaseleyo zilungiselelwe kwangaphambili ziiNzululwazi ngezebhayoloji, iiSayensi zeNtlalo, iiFizikhali Sayensi, kunye noLuntu.
IZIKOLO EZI-TOP 3 ZAMAZINYO EFLORIDA ZENZA UMSEBENZI WAMAZINYO
Idiploma yasimahla yamabanga aphakamileyo yesikolo kwi-Intanethi ngaphandle kweNdleko yaBantu abaDala
Izikolo ezili-9 zokuCoca iiNja eFlorida
13 Izikolo eziPhezulu zeZonyango eziFundisa simahla
Iikhosi ze-13 ezikwi-Intanethi eFlorida zaBafundi
Izikolo ezi-9 eziPhambili zeMed Med eCarlifonia
I-50 + iZikolo zeZonyango eziGqwesileyo eMelika zoBuchule obahlukeneyo
ezona zikolo zihamba phambili eFloridaIzikolo zokuqala eFloridaIzikolo eziphambili zangaphambili eFlorida
Post Previous:Izifundo ezikwi-Intanethi ze-AAT zinokukunceda njani ufumane umsebenzi wokuphendula?
Okulandelayo Post:I-8 iIyunivesithi eziPhezulu zaseIreland zaBafundi beZizwe ngezizwe